'The Transformers: The Movie' dia hiverina amin'ny teatra mandritra ny alina 2 hankalazana ny faha-35 taonany - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'The Transformers: The Movie' dia hiverina amin'ny teatra mandritra ny alina 2 hankalazana ny faha-35 taonany
'The Transformers: The Movie' dia hiverina amin'ny teatra mandritra ny alina 2 hankalazana ny faha-35 taonany
Autobots, mivoaha! Saingy, miadana tsikelikely ny aretin'ny vanin-taolana
by Trey Hilburn III Septambra 13, 2021 364 hevitra
Eny ary, Ny Transformers eto hampahatsiahy antsika ny fahafatesantsika ary mihantitra isika. The Transformers: The Movie hiverina amin'ny teatra hankalaza ny faha-35 taonany mandritra ny roa alina manokana fotsiny. Ny Fathom Events shindig dia hiverina amin'ny efijery lehibe hanapoahana ny vody Decepticon ary hampitomany antsika toy ny ankizy kely indray.
Ny synopsis ho an'ny The Transformers: The Movie mandeha toy izao:
“Nandritra ny an'arivony taona maro, ny mahery fo Autobots, notarihin'i Optimus Prime (Peter Cullen), dia niady tamin'ny ratsy fanahy Decepticons, notarihin'i Megatron (Frank Welker). Rehefa raikitra ny ady eo amin'ny Autobots sy Decepticons eto an-tany, dia misy fandrahonana lehibe kokoa noho izany koa. Unicron (Orson Welles, Citizen Kane), planeta lehibe niova fo izay mandany ny zava-drehetra alehany, dia mankany Cybertron handrapaka ny homeworld Transformers ary hamafa ireo Autobots sy Decepticons tsy nisy. Ny hany fanantenana dia ny Autobot Matrix of Leadership. Miaraka amin'ny fahavalo vaovao mihaza azy ireo ary misy loza manototra isaky ny vazan-vahindanitra, dia manao iraka mampidi-doza ireo Autobots mba hamonjy ny planeta izay hanova ny tanjony mandrakizay. "
Nahatsiravina ity sarimihetsika ity tamin'ny fahazazako. Tena nandrava ihany koa izany ary tsy nanana orinasa namoaka ankizy iray manontolo. Midika izany fa nivoaka izy ary nanaporofo avy hatrany fa ho henjana raha oharina amin'ilay fampisehoana. Spoilers, namono ireo mpilalao efa ela be izy io.
Azonao atao ny manafatra mialoha ny tapakila eto ETO mandritra ny roa alina lehibe izay atao amin'ny 26 sy 27 septambra. Zahao ireo lisitra ao amin'ilay rohy raha te hijery raha milalao ao amin'ny faritra misy anao izany.
Nitomany toy ny nitomaniako anao ve ianao The Transformers: The Movie?